Mekhsikho - ALinks
January 17, 2022 UAntika Kumari imisebenzi, Mekhsikho
IMexico iza kuba luqoqosho olusakhulayo kwiminyaka ezayo. Abanye babahlalutyi beBhanki yeHlabathi abaziwayo baqikelele ikamva loqoqosho lwaseMexico. Banike ingxelo yoqoqosho lwaseMexico iya kuba yeyesihlanu ngobukhulu nge-2050.
Disemba 18, 2021 UAntika Kumari Mekhsikho, ivisa
Wonke umntu ofuna ukuya eMexico uneendlela ezintathu zokufaka isicelo sokundwendwela eMexico. Olu khetho luxhomekeke: kwipaspoti yakho, kwii-visa ezikwipasipoti yakho, kwaye ekugqibeleni ezinye iimvume zokuhlala oziphetheyo. Ukuba u
Uyifumana njani i-visa yabakhenkethi baseMexico?
Oktobha 22, 2021 IShubham Sharma Mekhsikho, hamba, ivisa
IVisa yabakhenkethi yaseMexico luxwebhu oluvumela abantu bamanye amazwe abafunelwa visa ukuba batyelele ilizwe. Iivisa zabakhenkethi eMexico zisebenza kuphela kukhenketho, ishishini, utyelelo, iminyhadala yenkcubeko / yezemidlalo, okanye nayiphi na enye injongo engakufuniyo.
Ungayifumana njani i-visa yaseMexico evela eCanada?
Oktobha 15, 2021 UKaruna Chandna Mekhsikho, ivisa
IMexico iyiholide enento yomntu wonke. Ngapha koko, ngaphandle kwalo bhubhani, eli lizwe lihlala lifikeleleka kubakhenkethi behlabathi liphela. Kukho i-visa yasimahla kwiintlanga ezininzi. Nangona kufuneka ugcwalise ifom yezempilo xa ufika. Nantsi lapho
I-visa yaseTurkey evela eMexico
Agasti 27, 2021 IShubham Sharma Mekhsikho, hamba, ikarikuni, ivisa
Abaqhelekileyo, iNkonzo kunye nabanini bePaspoti ekhethekileyo eMexico bayadingeka ukufumana i-visa ngaphambi kokungena kwiRiphabhlikhi yaseTurkey. Ukuba uneSchengen, i-UK, iCanada, iJapan okanye i-visa yase-US okanye ungumhlali kwelinye lala mazwe